धुम्रपानकै कारण मस्तिष्क रक्तश्राव हुने खतरा
एजेन्सी । धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । धुम्रपानले शारिरीक, मानसिक स्वास्थ्यसँगसँगै सामाजिक रुपमा पनि नराम्रो बनाउँछ । धुम्रपान गर्ने बानीले विभिन्न प्रकारका ज्यानमारा रोग लाग्ने गर्छ । धुम्रपान गर्दा मुटु, फोक्सोदेखि लिएर मस्तिष्कलाई पनि खतरा पुर्याउँछ । एक नयाँ अध्ययनका अनुसार धुम्रपानले रक्तश्राव स्ट्रोक जस्ता...
काठमाडौ । स्मार्टफोन ब्राण्ड पोकोले नेपालमा दुईवटा नयाँ उपकरण – पोको एम२ र पोको सी ३ सार्वजनिक गरेको छ । ब्राण्डले नेपालमा यो दोस्रो पटक आफ्नो उत्पादनहरु नेपालमा भित्र्याएको हो, यसभन्दा अगाडि सन् २०१८ मा पोको एफ १ सार्वजनिक गरिएको थियो । शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले भन्नुभयो, “पोकोले पहिलै मी फ्यानहरु र...
कोरोना भाइरस मोबाइल स्क्रिनमा निकै खतरा, बिचार पु–याउनुस २८ दिनसम्म बाँच्न सक्छ
काठमाडौं । कोरोना भाइरस पैसा, सिसा र स्टिलको सतहमा २८ दिनसम्म बाँच्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अष्ट्रेलियाली शोधकर्ताले सोमबार बताएअनुसार कोरोना भाइरस फ्लु भाइरसको तुलनामा निकै लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने देखिएको हो । त्यसैले कोरोनाबाट बच्न बारम्बार हात धुने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने शोधकर्ताहरुको निष्कर्ष छ । अष्ट्रेलियाका...
सामसङ नेपाललद्वारा ग्यालेक्सी जेट फोल्ड २ स्मार्टफोनको प्रि–बुकिङ खुल्ला
काठमाडौ, असोज २२ । नेपालको विश्वासिलो ब्राण्ड सामसङले ग्यालेक्सी जेट फोल्ड २ स्मार्टफोनको प्रि–बुकिङ नेपाली बजारमा खुल्ला गरेको छ । ग्यालेक्सी जेट फोल्ड २, थर्ड जेनरेसन फोल्डेबल स्मार्टफोन नेपालमा पहिलोपल्ट उपलब्ध गराइएको हो । सामसङले फोल्ड प्रविधि नेपालमा पहिलोपल्ट भित्र्याएको हो । अविश्वसनीय इन्जिनिएरिङ तथा बोल्ड डिजाइनले...
भायानेटको बाचा, नयाँ जडान ४८ घण्टामा
काठमाडौ, भदौ १२ । भायानेटले ग्राहकले अनुरोध गरेको ४८ घण्टा भित्र इन्टरनेट जडान गर्ने सुविधा थप गरेर भायानेटले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रीयामा उल्लेखनीय कदम चालेको छ । कम्पनीका अनुसार अब नयाँ ग्राहकहरुले आफ्नो घर वा अफिसमा भायानेट जडान गर्न चाहेमा ४८ घण्टा भित्रै उनीहरुको घरमा भायानेटको इन्टरनेट चल्न थाल्नेछ । भायानेट, नेपालभरि...
काठमाडौ, साउन २८ । सफ्टवेयरको क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेशनललाई दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ । यो पुरस्कार बेलायतको अग्रणी बिजनेस पत्रिका एपीएसीले दक्षिण एशियाका व्यवसायहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जना गरेको प्रभावका आधारमा हरेक वर्ष प्रदान गर्ने गर्दछ । यो कुनैपनि नेपाली कम्पनीले पहिलो...
काठमाडौ, जेठ १७ । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले आज नेपालमा मी सीरीजमा दुई फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन—मी नोट १० लाइट र मी १० लन्च गर्ने घोषणा गरेको छ । मी १० नेपालका लागि पहिलो र सबैभन्दा नयाँ स्मार्टफोनको प्रीमियम फ्ल्यागशिप हो जसमा १०८ मेगा पिक्सल क्वाड क्यामेरा सेटअप, ५ जी कनेक्टिभीटिका लागि क्वालकम स्न्यापड्रेगन ८६५ मोबाइल...
काठमाडौं । बैज्ञानिकहरुले अन्तरिक्षमा एउटा ठूलो बिस्फोट भएको रहस्य पत्ता लगाएका छन् । पृथ्वीबाट ३९ करोड प्रकाश वर्ष टाढा भएको सो विस्फोट यसअघिका कुनै पनि विस्फोटभन्दा पाँच गुणा ठूलो रहेको बताइएको छ। एउटा अत्यधिक ठूलो ‘ब्ल्याक होल’बाट ठूलो मात्रामा शक्तिशाली ऊर्जा निस्किएपछि सो विस्फोट भएको पुष्टि भएको वैज्ञानिकहरूले दावी...
एजेन्सी । लोकप्रिय टिकटक स्टारहरुले केबल ६० सेकेन्डको पोस्टबाटै २ लाख डलरसम्म कमाइ गर्ने गरेको र आगामी वर्ष प्रमुख ब्रान्डहरुसँग १० लाख डलरसम्मको शुल्क लिन सक्ने प्राविधिक विज्ञहरुले बताएका हुन् । करोडौँ फलोअर भएका चर्चित टिकटक सेलीब्रेटीहरुले ठुल्ठुला कम्पनीका ब्रान्डको प्रचार गर्नुले उनीहरुलाई विशेष रुपमा फाइदा पुग्ने बताइएको छ...
क्यालिफोर्निया । पृथ्वी गोलो नभइ चेप्टो छ भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि अन्तरिक्षमा जाने खोज्ने एक अमेरिकी नागरिकको दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । ‘पागल’ उपनाम गरिएका ६४ वर्षीय माइक ह्यूजले अन्तरिक्षमा जान वाष्पशक्तिबाट चल्ने एउटा रकेट बनाएका थिए । आफ्नो अन्तरिक्ष यात्राका लागि शनिबार रकेट प्रक्षेपण गरेका ह्यूजको रकेट दुर्घटनामा...
काडमाडौ, फागुुन ८ । एच्. एम. डी ग्लोबलले आफ्नो ६ प्रकारका नोकिया फोनहरु आईएफ डिजाइन अवार्ड २०२० द्धारा सम्मानित भएको घोषणा गरेको छ । सम्मानित भएका उत्कृष्ट डिजाइनका ६ प्रकारका नोकिया फोनहरु मध्ये २ स्मार्टफोन र ४ फिचर फोनहरु छन् । आईएफ डिजाइन पुरस्कार विश्वको सब भन्दा पुरानो स्वतन्त्र डिजाइन संगठन आई एफ अन्तराष्ट्रिय फोरम डिजाइन...
काठमाडौ, फागुुन ७ । ओपोले केही समय अघि विशेषगरी सिर्जनशिल यूवा पुस्ता लक्षित गर्दै नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । रेनोटू एफ, ओपोको लोकप्रिय रेनो सिरिज अन्तर्गत भित्र्याइएको संस्करण हो । प्रयोगकर्ताको रचनात्मकतालाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले यसमा फोटोग्राफीमा सुधार...
काठमाडौ, माघ २३ । शाओमी, ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडरले आउदै गरेको भ्यालेन्टाइन दिवसको अवसरमा नेपालमा आकर्षक योजना ल्याएको छ । शाओमीले फ्लागसीप किलर स्मार्टफोन रेडमी के २० प्रो मा रु ३००० को भारी छुटको घोषणा गरेको छ जसलाई अब रु ४६,९९९ मा खरिद गर्न सकिन्छ । शीर्ष विशेषता र पप–अप क्यामेरा भएको यो स्मार्टफोन प्रेमीहरुका लागी आदर्श उपहार हुनेछ...
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेन्जरमा अहिले एउटा ‘म्यासेज’ भाइरल बनेको छ । यो म्यासेज अझै केही दिन यसरी नै भाइरल हुनेछ । तपाईंलाई आएको उक्त म्यासेजमा क्लिक गर्नुभयो भने घण्टी भएको ठाउँ खुल्छ । त्यसलाई पनि क्लिक गरेमा नयाँ वर्ष २०२० को शुभकामना प्राप्त हुन्छ । यो म्यासेजलाई तपाइले अन्य साथीहरुलाइ पनि पठाउने व्यवस्था...
काठमाडौं,मसिंर २७ l पछिल्लो समय यात्रु्हरुको सहजताका लागि पनि विभिन्न एपहरु संचालनमा आएका छन् । जसले मानिसको दैनिक यात्रालाई सहज बनाएको छ । यस्तै एपहरुको भिडमा एउटा नयाँ एप सार्वजनिक गरिएको छ, ट्याक्सीमाण्डु । ‘फील सेफ राइड अन टाइम’ स्लोगनकासाथ संचालनमा ल्याइएको यो एप परम्परागत ट्याक्सी व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग गरी सहज रुपमा...